Nke ahụ pụtara na dabere na akụkọ ọchụchọ gị, nsonaazụ gị ga-adị iche. Ọ bụrụ n’ị na-enyocha ogo saịtị gị, ị nwere ike chọpụta na ha niile agamago nke ọma. Agbanyeghị, ọ ga - abụrịrị na ọ kaara gị mma ma ọ nweghị onye ọ bụla. Iji nyochaa ogo gị n'ezie, ị ga-agbanyụ nsonaazụ ọchụchọ ahaziri iche.
Wepu kuki ọ bụla na Google. Nke a ga - apụ apụ n’achọghị ahaziri nke ọma. Ọzọ, Nchọgharị nkeonwe na Safari, Firefox ma ọ bụ IE8 kwesịrị inwe otu mmetụta ahụ. Na Google Chrome, a na-akpọ atụmatụ ahụ Incognito na-eme nchọgharị.
Na-adịgide adịgide wepu gị akụkọ ihe mere eme, nbanye gị Akụkọ Ọwa Ozi Gugul ma gbanyụọ ya. Gaa Akaụntụ M na pịa Dezie ọzọ ka My Ngwaahịa na pịa Hichapụ Akụkọ Weebụ na-adịgide adịgide. Mgbe ehichapụ akụkọ ihe mere eme gị, ọ nweghị ụzọ ị ga-esi rụpụta nsonaazụ ọchụchọ gị. Ikwesiri ime nke a mgbe mgbe.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ime ka ọ dị mfe na onwe gị, m ga-akwado igbanwe ya (n'ụzọ dị ịtụnanya) Google Chrome. Nwere ike imeghe windo Incognito (ctrl-shift-N) ọ gaghị enweta akụkọ ọchụchọ gị ma ọ bụ tọọ kuki… ị ga-enwe ike ịnọ na-abanye na Google na otu windo yana incognito na windo ọhụrụ. Nke ahụ bụ otu m si were nseta ihuenyo ahụ dị n'elu… ahaziri ya n'aka ekpe ma ọ bụghị ahaziri ya n'aka nri na windo incognito.
Ihe nke Google Chrome bu na Nchọgharị nkeonwe atụmatụ nke ihe nchọgharị ndị ọzọ na-eme windo niile na nzuzo. I nweghi ike inwe ufodu ndi di na ufodu ndi na adighi. Chrome arụọla ezigbo ọrụ n’ime mbọ a.